..त्यसपछि ओलीले बोलाए गोकर्ण विष्टमालाइ बालुवाटारमा ! « Etajakhabar
..त्यसपछि ओलीले बोलाए गोकर्ण विष्टमालाइ बालुवाटारमा !
काठमाडौ । विपक्षीको गठबन्धन बलियो हुँदै गएपछि अप्ठेरोमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेका माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई बेग्ला बेग्लै बोलाउँदै छलफल गर्न थालेका छन् । विहिवार मध्यरातमा माधव पक्षका योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाललाई बोलाएर कुराकानी गरेका ओलीले शुक्रवार फेरी गोकर्ण विष्टलाई बोलाएका छन् ।
वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिने घोषणा ओलीले गरेपछि विपक्षी दलहरुले उनलाई हराउन रणनीति बनाएका छन् । विपक्षीको रणनीतिमा एमालेकै माधव नेपाल समुह पनि सहभागी भएपछि ओली अप्ठेरोमा परेको हो । नेपालले पनि दौडधुप जारी राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा ओलीले आफ्नै पार्टीका रु ष्ट नेताहरुलाई बोलाएर कुराकानी गर्न लागेका हुन् ।
माधव नेपाल पक्षमा रहेर पनि मौन बसेका गोकर्ण विष्टलाई ओलीले शुक्रवार वालुवाटार बोलाएर कुराकानी गरेका छन् । विष्टलाई ओली आफैले फोन गरेर बोलाएका थिए । उनले वालुवाटारमा विष्टसंग लामो कुराकानी गरेका छन् ।
यद्धपी विष्टले पनि पार्टीभित्र देखा परेका समस्या समाधानका लागि ओलीले नै पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताइएको छ । माधव नेपाल लगायतका केही नेतामाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिएर विश्वासको वातावरण बनाउन विष्टले ओलीलाई आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ ।
नेपाल समूहमा रहे पनि ओली पक्ष प्रति पनि नरम रहँदै आएका विष्टलाई खेमा परिवर्तन गर्न सक्ने भन्दै ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । केहि महिनायता दुई पक्षका एमाले नेताहरु एकआपसमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रँदा पनि विष्ट मौन रहँदै आएका छन्।
तर विष्टको यो पुरानै शैली हो । विष्ट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र पार्टी संगठनमा बलियो पकड भएका नेता हुन् । उनी मन्त्री बन्दा पनि राम्रो काम गरेर जनताको मन पनि जितेका छन् । ओलीले नेपाल पक्षका घनश्याम भूसाल, योगश भट्टराई लगायतका नेताहरुसँग पनि गएराति बालुवाटारमै बोलाएर घण्टौं छलफल गरेका थिए।